दश वर्षअघि नै थाहा पाउन सकिन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर | Hamro Doctor News
आइसोलेसनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक १० हजार जोखिम भत्ता
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे कोरोना भएपनि घरमै बस्न सकिने
सरकारी चिकित्सक संघको चौथो निर्वाचन सम्पन्न, को को भए निर्वाचित ?
सरकारी चिकित्सक संघको चौथो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा डा रविन खड्का विजयी
पाठेघर प्रजनन प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग हो । यसर्थ पाठेघर महिलाको लागि मात्रै होइन सिंगो मानवजीवन विकासका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण अंग हो । महिलाका विभिन्न अंगमध्येपाठेघरकोमुखको क्यान्सरको जोखिम उच्च रहने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । पाठेघरको मुखमा किन क्यान्सरको जोखिम उच्च हुन्छ र यसबाट बच्ने उपाय बारेस्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.अनु बज्राचार्यको सुझाब :-
महिलामा सबै भन्दा बढी देखिने क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर नै हो । पाठेघरको मुखको क्यान्सरकै कारण धेरै महिलाले ज्यान गुमाउँदै पनि आएका छन । पछिल्ला तथ्यांकहरू हेर्दा बर्सेनी दुई हजार भन्दा बढी महिला यस रोगबाट पीडित बनिरहेका छन् ।
के हो पाठेघरको मुखको क्यान्सर
पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई सर्भाइकल क्यान्सर पनि भनिन्छ । महिलामा पाठेघरको, डिम्बासयको र पाठेघरको मुखको क्यान्सर अलग अलग हुन सक्छ ।महिलामा देखिने क्यान्सर मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबै भन्दा बढी हो ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने मुल कारण भनेकै ह्युमन प्यापुलुमा भाईरस(एचपीबी) भाइरसको संक्रमण हो । एचपीबी भाइरसभित्र पनिएक सय भन्दा बढी उप भाइरसहुन्छन् । यी मध्ये १५/१६ वटा भाइरसलाई बढी जटिल भाइरसका रुपमा लिइन्छ । यी मध्ये १६ र १८ नम्बरको भाइरसले पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउँछ । यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट सर्ने गर्दछ ।
धेरै व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्नु ।
धेरै धुम्रपान, मध्यपान गर्ने ।
रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका ।
धेरै बच्चा जन्माउँदा ।
सानो उमेरमै यौन सम्पर्क राख्दा वा बच्चा जन्माउँदा ।
यौन सम्पर्क नगर्ने महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम कम
पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढी जसो यौन सम्पर्कबाट नै लाग्ने गर्छ । महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुमा पुरुषको भूमिका गहन हुन्छ । यौन सम्पर्कका बेला पाठेघरको मुखमा चोट लाग्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यसले पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ । यौन सम्पर्क नगरेका महिलामा यो क्यान्सरको सम्भावना न्यून हुन्छ ।
महिनावरी अनियमीत हुनु ।
यौन सम्पर्क राखिसकेपछि रगत देखिनु ।
फोहोर गनाउने पानी बग्नु ।
योनी चिलाउनु ।
महिनावारी सुकिसकेकाहरूमा पुनः रगत वा गनाउने पानी बग्नु ।
महिनावारीका बेला रगत बढीबग्नु ।
तल्लो पेट दुख्नु, आलस्य हुनु ।
क्यान्सर क्रोनिक अबस्थामा पुगिसकेको भए दिसा, पिसाबमा समस्या देखिनु,हड्डी दुख्नु ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर एक मात्र यस्तो क्यान्सर हो, जुन हुनु भन्दा १० वर्ष पहिले नै थाहा पाउन सकिन्छ । गर्भासयको स्राब परीक्षण गरी क्यान्सर हुन लागे नलागेको एकीन गर्न सकिन्छ । साथै यो क्यान्सरबाट बच्न निम्न साबधानी अपनाउनु पर्छ ः
विवाहिता महिलाले वर्षको एक पटक प्याप परीक्षण गराउने ।
धेरै व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क नराख्ने ।
सानो उमेरमै विवाह नगर्ने तथा सानै उमेरमा बच्चा नजन्माउने ।
महिनावारी अनियमित भए वा महिनावारी सुकिसकेका महिलामा पुनः रगत देखिए तुरुन्त परीक्षण गराउने ।
स्वस्थ र सन्तुलित खाना खाने ।
पाठेघरको क्यान्सर भएको सुरुवाती चरणमै थाहा पाए उपचार पद्धति पनि निकै सहज हुन्छ । यसलाई पूर्ण निको पार्न सकिन्छ । तर,क्रोनीक अवस्थामा पुग्यो भने पूर्ण निको पार्न सकिदैन् ।
सल्यक्रिया : सल्यक्रिया गरि पाठेघर निकाल्ने ।
रेडियोथेरापी : क्यान्सर भएको कोषलाई मार्न विकिरणप्रयोग गर्ने ।
किमोथेरापी : औषधिको प्रयोगद्वारा क्यान्सर भएको कोषहरू नष्ट गर्ने ।
प्यालिएटिभ केयर : रोगीको दुखाई वा अन्य अप्ठयारो कम गर्ने विशेष उपचार विधि ।
Last modified on 2017-12-22 10:34:51
Dr. Anu Bajracharya
NEPAL CANCER HOSPITAL AND RESEARCH CENTER PVT. LTD.